iPhone တွင်ကဲ့သို့ emoji တစ်ခုကို အမြန်ဖန်တီးနည်း | Androidsis
ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် iPhone ပေါ်ရှိ Emoji ကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် emoji ဖန်တီးနည်း
လက်ရှိတွင် WhatsApp နှင့် အခြားသော အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် သင်သည် 'တရားဝင် အီမိုဂျီများ' ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤ ရုပ်ပြောင် ၎င်းတို့ကို Unicode Consortium မှ နှစ်စဉ် စီမံခန့်ခွဲပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်၊ iPhone တွင်ကဲ့သို့ emoji ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။
ယနေ့ခေတ်တွင် အီမိုဂျီများသည် လူမှုကွန်ရက်များ၏ အခြေခံကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းအတွက်သာ ဖန်တီးထားသည့် တည်းဖြတ်သူ၏ ကျေးဇူးကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင် emojis များကို ဖန်တီးနိုင်ကာ အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ၎င်းတို့ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အချို့သောအပလီကေးရှင်းသည် ဥပမာအားဖြင့်၊ Slack၊ WhatsApp နှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် emojis ဖန်တီးရန် ပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် instant messaging app ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်တွင် WhatsApp သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ခွင့်မပြုဘဲ ၎င်းကို ထည့်သွင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဟု ထင်ရသည်။ ဖြစ်နိုင်သလို ဒီနေ့မှာတော့ သင့်စိတ်ကြိုက် Emoji တွေကို ဖန်တီးနိုင်စေမယ့် မတူညီတဲ့ Emoji တည်းဖြတ်သူတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် iPhone ပေါ်ရှိ Emoji ကဲ့သို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နည်းကို ရှင်းပြပါမည်။
1 iPhone ကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် emoji ဖန်တီးရန် အခမဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်များ
1.1 Emoji Builder၊ ကိုးကား
2 အခြားရွေးချယ်စရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
3 WhatsApp တွင် သင့်စိတ်ကြိုက် အီမိုဂျီကို အသုံးပြုနည်း
iPhone ကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် emoji ဖန်တီးရန် အခမဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်များ
Emoji Builder၊ ကိုးကား
Emoji Builder သည် သင့်အား emojis များကို ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း မျက်နှာများမှသာ ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်မျက်နှာ၊ ဦးထုပ်ပါသော၊ အန်ခြင်း၊ အနီရောင်၊ လူရွှင်တော်မျက်နှာ၊ ကြောင်နှင့် အခြားအရာများစွာဖြင့် စတင်တည်းဖြတ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ Emoji ၏အခြေခံကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်မျက်နှာ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မျက်လုံးနဲ့တူပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အလိုအလျောက် ပါးစပ်ကို ရွေးချယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ emojis တွင် သင်ထည့်လိုသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ဓာတ်ပုံများအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်သည် ပိုမိုသွက်လက်ပါသည်။
သို့သော် သင့် emoji တွင် သင်ထည့်လိုသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို တင်သွင်းရန်အတွက် ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းတွင် သင်ရှာတွေ့မည့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရင်းအမြစ်အမျိုးအစားများလည်း ရှိပါသည်။ ဒြပ်စင်များကို တင်သွင်းနိုင်စေရန်၊ ၎င်းသည် အသွင်အပြင်ကို ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိဘဲ Emoji ၏ထိပ်တွင် ပြသနိုင်ရန် နောက်ခံမပါဘဲ PNG ဖော်မတ်ဖြစ်ရပါမည်။ သင်၏ အီမိုဂျီများကို တည်းဖြတ်ခြင်း အပြီးသတ်သည့်အခါ 'သိမ်းဆည်းရန်' ခလုတ်ကို နှိပ်ရပါမည်။ ထိုအချိန်တွင် အီမိုဂျီကို PNG ဖော်မတ်ဖြင့် သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင်လိုချင်သောအက်ပ်များတွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် သင့်လျော်သောသီးနှံတစ်ခုဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင် စိတ်ကြိုက်အီမိုဂျီတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသော်လည်း 'ကျပန်းနည်းလမ်း' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက သင်သည် 'ကျပန်း' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက တစ်ခဏအတွင်း ဝဘ်က ၎င်းကို သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်နှစ်သက်သည့် အီမိုဂျီတစ်ခုရလာသည်အထိ ၎င်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှ WhatsApp တွင် သင်ရှာဖွေနိုင်သည့် တရားဝင်စာများနှင့် ဆင်တူမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဒါကြောင့် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် ဤပရိုဂရမ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Emoji ဆောက်သူ ၎င်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် စိတ်ကြိုက်အီမိုဂျီအသစ်များပြုလုပ်ရန် အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံးဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော်လည်း သင့်အား စိတ်ကြိုက် emojis များကို အခမဲ့ဖန်တီးနိုင်စေမည့် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များလည်း ရှိသေးသည်။
အဲဒီထဲက တစ်ခုပေါ့။ အိန်ဂျယ် Emoji ထုတ်လုပ်သူသင့် emojis ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးမည့် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်အများအပြားပါရှိသည်။ ဤတွင် သင့်တွင် မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ လက်၊ မျက်မှန်၊ မျက်ခုံး၊ မုတ်ဆိတ်နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ အမျိုးအစားအလိုက် စီထားသော သင့် emojis တွင် ထည့်ရန် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ဤအရာအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Disney Emoji ဖန်တီးသူ. ၎င်း၏အမည်မှာ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် Disney emojis ကို ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ထူးခြားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးလုံးအတွက် တရားဝင်အက်ပ်တစ်ခုရှိသည်။ အသုံးပြုသောအခါတွင်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ။ သင့်တွင် သင့် အီမိုဂျီကို သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အပြင် မျက်နှာ၊ ဆံပင်၊ မျက်ခုံး၊ မျက်လုံး၊ မတူညီသော ပါးစပ်၊ ဆံပင်၊ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းခြင်းစသည့် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည့် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နားကပ်၊ မျက်မှန်စသည်ဖြင့် မျက်နှာအမူအရာများ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော သိချင်သောရွေးချယ်စရာများအပြင်၊
ယခု Slack ကဲ့သို့သော အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် စိတ်ကြိုက် emojis များကို သင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. သင့်တွင် ၎င်းတို့ကို WhatsApp ကဲ့သို့သော အခြားသော အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မူရင်းနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို စတစ်ကာများအဖြစ် သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် သင်သည် ရုပ်ပုံအား WhatsApp ကိုယ်တိုင်အတွင်းစတစ်ကာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် သင်၏ဖန်တီးမှုများကို အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မူလပုံစံများထက် ပိုကြီးသော အီမိုဂျီကိုလည်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
WhatsApp တွင် သင့်စိတ်ကြိုက် အီမိုဂျီကို အသုံးပြုနည်း
လက်ရှိတွင် iPhone နှင့် Android တွင်လည်း Application အများအပြားရှိသည်။ ယခင်စာပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဉာဏ်၏စတစ်ကာများကို ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဤစတစ်ကာများကို သင်သိမ်းဆည်းထားပြီး မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်သည့်ပုံများဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနေရာတွင် သင်သည် စတစ်ကာပုံစံဖြင့် ဖန်တီးရန် သင်ဖန်တီးပြီး သိမ်းဆည်းထားသည့် emojis များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သင်ဖန်တီးထားတဲ့ အီမိုဂျီရုပ်ပုံကို သင့်မိုဘိုင်းမှာ ပေးပို့ပြီး ၎င်းအတွက် အသုံးပြုတဲ့ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုခုထံ PNG ဖော်မတ်နဲ့ အပ်လုဒ်လုပ်ရပါမယ်။
အီမိုဂျီရုပ်ပုံကို တင်သွင်းသည့်အခါတွင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းကို အွန်လိုင်း အီမိုဂျီ တည်းဖြတ်မှုတွင် သိမ်းဆည်းထားသကဲ့သို့ ထားခဲ့ပါ သို့မဟုတ် သင်အလိုရှိသော အပြောင်းအလဲများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယရွေးချယ်မှုက သင့်ကိုယုံကြည်စေပြီး အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်ပါက၊ သင်သည် စတစ်ကာအသစ်ကို သိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီး WhatsApp အပလီကေးရှင်းအတွင်းတွင် ၎င်းကို WhatsApp စတစ်ကာပြခန်းတွင်သာ ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် မည်သည့်အသုံးပြုသူထံသို့ ပေးပို့သောအခါ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုစတစ်ကာပုံစံဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မူလရွေးချယ်ခွင့်သည် ယခုအချိန်တွင် လက်တွေ့မဟုတ်သောကြောင့် စတစ်ကာဖော်မတ်ဖြင့် WhatsApp မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် အီမိုဂျီများ ပေးပို့ရန် လက်ရှိတည်ရှိနေသော တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် iPhone ပေါ်ရှိ Emoji ကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် emoji ဖန်တီးနည်း
WhatsApp အတွက် အကောင်းဆုံးကာတွန်းစတစ်ကာအတွဲများ
ILIFE A11၊ သုံးသပ်ချက်၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့် ဈေးနှုန်း